Ny lahatsoratr'i Adrian Chang momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Adrian Chang
Adrian Chang, talen'ny fandraisana anjaran'ny mpanjifa ao amin'ny Informatica, dia mpisava lalana amin'ny fitantanana orinasa. Izy dia mpitarika nahazo loka tamin'ny famokarana fitakiana B2B, ny fahombiazan'ny mpanjifa ary ny marketing nomerika, ary manova ny fomba fanaovana asa izy.
Talata, Aogositra 25, 2020 Talata, Aogositra 25, 2020 Adrian Chang
Nisy fiovana be dia be tamin'ny fomba fiasa tato anatin'ny volana vitsivitsy izay ny sasany amintsika dia mety tsy hahatsapa avy hatrany ireo karazana fanavaozana izay efa nahazo setroka talohan'ny nitrangan'ny areti-mandringana manerantany. Amin'ny maha mpivarotra antsika, ny teknolojia any an-toeram-piasana dia manohy mampanakaiky antsika hatrany amin'ny maha ekipa antsika mba hahafahanay manompo ny mpanjifantsika amin'izao fotoan-tsarotra izao, na dia mandalo fanamby amin'ny fiainantsika manokana aza izahay. Zava-dehibe ny mahitsy fo amin'ny mpanjifa, toy ny